စိတျဆိုးနတေဲ့ခဈြသူလေးကို ထငျ ရှူးတောထဲမှာ Surprise တိုကျလို ကျတဲ့ ဖွိုးလေး – XB Media Myanmar
ပရိသတျတှအေားကနြရေတဲ့ စုံတှဲလေးတဈတှဲဖွဈတဲ့ ဖွိုးလေးနဲ့ဝါဆိုမိုးဦးတို့ကတော့ တဈ ယော ကျကိုတဈယောကျ နားလညျမှုအပွညျ့နဲ့ လကျတှဲလာခဲ့တာ ခဈြသူသကျတမျး(၄) နှဈကြျောကွာမွငျ့ခဲ့ပွီဖွဈပါတယျ။သူတို့နှဈဦးကတော့ ရနျဖွဈလိုကျ၊ပွနျခဈြလိုကျနဲ့ ဖွတျ သနျးလာခဲ့တဲ့အခဈြခရီးလမျးကိုလညျး ပရိသတျတှကေိုမြှဝပေေးလရှေိ့သူတှပေါ။
ဒီနခေ့ဈြသူမြားနလေ့ေးမှာတော့ ရိုကျကှငျးကွောငျ့အလုပျမြားနတေဲ့ဖွိုးလေးကို ဝါဆိုကတော့ စိတျဆိုးနခေဲ့တာဖွဈပွီး “နရေ့ကျတိုငျးဟာ Valentines နှဈပတျလညျတှရေတှေကျလို့.. V Day ကွီးမှာ အလုပျတှလေိုကျလုပျပေးရမှာမလို့ စိတျဆိုးနတေဲ့ကောငျမလေး ဒီနှဈတော့ ဘာမှ မလုပျပေးနိုငျလို့ ခှငျ့လှတျပါ” ဆိုပွီး ဖွိုးလေးကတော့ မနကျပိုငျးမှာတော ။ဒါပေ မယျ့ ဒီနနေ့လေ့ညျခငျးလေးရောကျတဲ့အခြိနျမှာတော့ ဝါဆိုတဈယောကျ စိတျကောကျပွေ သှားအောငျ ဖွိုးလေးကတော့ Surprise လေးလုပျပေးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ “
သူ Valentine’s Day မှာ Shooting ရိုကျလို့စိတျဆိုးပွီး သူ့ Shooting ကိုနလေ့ညျမှ လိုကျသှားတာ.. ဟိုလညျးရောကျရော ကိုယျ့ကို ထငျရှူးပငျလေးတှကွေားမှာ Surprise တိုကျလိုကျရော ဟီးဟီး.. Thank U ကို.. မအားတဲ့ကွားက Surprise လုပျပေးလို့ Happy Valentine’s Day ပါ” ဆိုပွီး ကွညျနူးဖှယျပုံရိပျလေးတှနေဲ့အတူ ပရိသတျကို မြှဝပေေးခဲ့ပါတယျ။
သူတို့ကတော့ မကွာသေးခငျကမှ သူတို့နှဈဦးရဲ့အခဈြတှနေဲ့ လှမျးခွုံထားတဲ့ “အလိုအပျ ဆုံးအရာ” ဆိုတဲ့သီခငျြးလေးကို ထှကျရှိထားပွီး ပရိသတျတှရေဲ့နှဈခွိုကျအားပေးမှုကို ရရှိထားပါသေးတယျ။အမွဲတမျးရိုနတေဲ့ သူတို့နှဈဦးကတော့ ဒီနခေ့ဈြသူမြားနလေ့ေး မှာ လညျး အခြိနျမရှိတဲ့ကွားက ပြျောရှငျစရာလေးတှဖေနျတီးခဲ့ကွသေးတာမို့ ဆယျလီ ကမ် ဘာပရိသတျကွီးအတှကျ သူတို့နှဈဦးရဲ့ပြျောရှငျစရာပုံရိပျလေးတှကေို မြှဝပေေးလိုကျ ပါတယျနျော။
ပရိသတ်တွေအားကျနေရတဲ့ စုံတွဲလေးတစ်တွဲဖြစ်တဲ့ ဖြိုးလေးနဲ့ဝါဆိုမိုးဦးတို့ကတော့ တစ် ယော က်ကိုတစ်ယောက် နားလည်မှုအပြည့်နဲ့ လက်တွဲလာခဲ့တာ ချစ်သူသက်တမ်း(၄) နှစ်ကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးကတော့ ရန်ဖြစ်လိုက်၊ပြန်ချစ်လိုက်နဲ့ ဖြတ် သန်းလာခဲ့တဲ့အချစ်ခရီးလမ်းကိုလည်း ပရိသတ်တွေကိုမျှဝေပေးလေ့ရှိသူတွေပါ။
ဒီနေ့ချစ်သူများနေ့လေးမှာတော့ ရိုက်ကွင်းကြောင့်အလုပ်များနေတဲ့ဖြိုးလေးကို ဝါဆိုကတော့ စိတ်ဆိုးနေခဲ့တာဖြစ်ပြီး “နေ့ရက်တိုင်းဟာ Valentines နှစ်ပတ်လည်တွေရေတွက်လို့.. V Day ကြီးမှာ အလုပ်တွေလိုက်လုပ်ပေးရမှာမလို့ စိတ်ဆိုးနေတဲ့ကောင်မလေး ဒီနှစ်တော့ ဘာမှ မလုပ်ပေးနိုင်လို့ ခွင့်လွတ်ပါ” ဆိုပြီး ဖြိုးလေးကတော့ မနက်ပိုင်းမှာတော ။ဒါပေ မယ့် ဒီနေ့နေ့ လည်ခင်းလေးရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ ဝါဆိုတစ်ယောက် စိတ်ကောက်ပြေ သွားအောင် ဖြိုးလေးကတော့ Surprise လေးလုပ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ “
သူ Valentine’s Day မှာ Shooting ရိုက်လို့စိတ်ဆိုးပြီး သူ့ Shooting ကိုနေ့လည်မှ လိုက် သွားတာ.. ဟိုလည်းရောက်ရော ကိုယ့်ကို ထင်ရှူးပင်လေးတွေကြားမှာ Surprise တိုက်လို က်ရော ဟီးဟီး.. Thank U ကို.. မအားတဲ့ကြားက Surprise လုပ်ပေးလို့ Happy Valentine’s Day ပါ” ဆိုပြီး ကြည်နူးဖွယ်ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့အတူ ပရိသတ်ကို မျှဝေပေးခဲ့ပါ တယ်။
သူတို့ကတော့ မကြာသေးခင်ကမှ သူတို့နှစ်ဦးရဲ့အချစ်တွေနဲ့ လွှမ်းခြုံထားတဲ့ “အလိုအပ် ဆုံးအရာ” ဆိုတဲ့သီချင်းလေးကို ထွက်ရှိထားပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့နှစ်ခြိုက်အားပေးမှုကို ရရှိထား ပါသေးတယ်။အမြဲတမ်းရိုနေတဲ့ သူတို့နှစ်ဦးကတော့ ဒီနေ့ချစ်သူများနေ့လေး မှာ လည်း အချိန်မ ရှိတဲ့ကြားက ပျော်ရွှင်စရာလေးတွေဖန်တီးခဲ့ကြသေးတာမို့ ဆယ်လီ ကမ် ဘာပရိသ တ်ကြီးအတွက် သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ပျော်ရွှင်စရာပုံရိပ်လေးတွေကို မျှဝေပေးလိုက် ပါတယ်နော်။